जनादेश विखण्डन र विभाजनको लागि होइन एकता र संम्बृद्धिको लागि ? – Saurahaonline.com
बाबुराम खराल : नेपालको परिवर्तनको लागि दशकौं अघिबाट निरन्तर क्रियाशील हाम्रो देशको सन्दर्भमा नेपालका दुइ प्रमुख कम्युनिष्ट घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र का बिच पार्र्टी एकता भएको करीव ३ वर्ष भएको र यो एकतालाई जनसमुदायको ठूलो हिस्साले मन पराएको, अब स्थिर सरकार वन्ने भो, अब त फटाफट काम हुन्छ स्वच्छ र पारदर्शी सरकार वनेको छ , परिवर्तन र नयाँपनका साथ अब देश माथि चढदै जानेछ , यो रुपमा लिएको अवस्था हो ।
पुराना दुइ पार्टी विस्थापित भएका छन र यी दुइ पार्टीको ठाउमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वनेको छ । पुरानाको आधारमा त्यसको ठाउमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा वनेको छ ।
२००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आपसि अन्तर्विरोधको उचित समाधान नगरिदा लगभग शुरु देखिनै समय समयमा गरिएका पार्टीहरुका टुट फुटका अनेकौै घटनाक्रमले जेलिएको विगत इतिहास हाम्रो सामु विद्यमान छ । मूलपर्वाहको रुपमा नेकपाको यो पछिल्लो एकिकरणले जनतामा निकै आशा जागेको कारण जनताले नेकपालाई झन्नै २ तिहाइ सन्निकट प्रचुर वहुमत दिएका हुन ।
घोषणापत्र अनुसारका कामहरु फटाफट हुन नसक्नु , नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि गरिएका समझदारीहरुलाई इमान्दारी पुर्वक लागु नगर्नु , आफु पावरमा हुदा अर्कालाई हेप्ने प्रवृत्ति दोहो¥याइ रहने , पावरमा सधै रहन सकिदैन तसर्थ समयक्रममा अल्लि तल झर्न पर्दाको अवस्था आत्मसाथ गर्न नसक्नु , अर्कालाई बढी पेल्न खोज्नु , पार्टी विभाजनको विजारोपण स्वयं शिर्ष तहवाटै चाहेको आसय आउने र कतिपय सन्दर्भमा छताछुल्ल पाराले अघि बढन खोज्नु ।
६ महिना मै गर्ने भनिएको एकता प्रकृया अहिले सम्म नसकिनु , कमिटीका बैठक नियमितरुपमा गर्न नखोज्नु यी सर्वसत्तावादी र कतिपय अधिनायकवादी सोचका कारण अर्थात विधान विधि र प्रक्रिया अनुरुप पार्टी कमिटी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु आदि कारणहरुले गर्दा संगठनात्मक व्यवस्थापन ठीक संग हुन सकिरहेको छैन । विनम्रता पूर्वक राख्न सकिने अवस्थामा पनि छुचो वोली वोलिनु यी विषय जायज र उचित कुनै पनि अवस्थामा हुन सक्तैनन । राज्य सत्ता र सरकार आरामले चलाउन सकिने र सक्दै आउनुभएका सम्माननिय प्रधानमन्त्री र श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष क. केपी ओलीका सल्लाहकारहरु र सचिवालयमा रहेकाहरु सेवाग्राही र आफ्नेै पार्टीेका कार्यकर्ता संग जुन रुपमा उनीहरुको वोली वचन र व्यवहारमा सरलता अपेक्षितरुपमा देखिएको छैन । अहिले जनताले आफ्नो समर्थन गएको चुनावमा प्रदान गरेकोमा जनप्रिय र लोकप्रिय काम गर्न वर्तमान सरकारलाई अझै नसकिरहेको सन्दर्भ मुखरित भएको छ । सरकारको काम र सरकार संचालनको काममा संलग्न संग संगठनको प्याकेजमा पुनःसंरचना र व्यवस्थापनमा कुशलता आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।
यो सरकार कम्युनिष्ट पार्टीेको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारले त्यसको वैचारिक र सैद्धान्तिक अवधारणा अनुरुपका प्रारम्भिक काम सम्पादन हुनुपर्नेमा, अझेै जनअपेक्षा अनुसार हुन सकिरहेको छैन । जनताले कार्यकर्ताले पहिचान देखिनेगरी काम भएको अवस्था खोजि रहेका छन ।
आजको आवश्यकता जनताले आशा गरेको शुसासन हो आधुनिक र सुविधा सम्पन्न प्रशासन हो । नियमित र गतिशील कामका शैलिहरु हुन । पूर्णरुपमा एकिकरण भएको अवस्थाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा होस । वास्तवमा सहमति वा विधि र स्वस्थ प्रतिस्प्रधामा वहुमत अल्पमत जे गरिए पनि ठीक संग पार्टीैै चलायमान होस । नियमितरुपमा बैठक भेलाहरु सम्पन्न हुन् अनिमात्र विकासले गति लिने छ ।
यसबीच पार्टी काममा लिङ्गरिङ्ग गरेको–गरेको छ उपलव्धि शुन्य, नियमित लयमा जान नसक्नुको पछि यो पार्टीलाई यो अवस्थामा आउनमा हजारौ कार्यकर्ता नेता सबैको योगदानको कुल योगले नै हो । महान शहिदहरुको वलिदानले नै हो ।
अहिले आएर मानिसहरुले भन्न थालिरहेको पाइन्छ कम्युनिष्टहरु व्यवस्था परिवर्तनमा , क्रान्तिमा योगदान दिने विषयमा सफल छन तर शाशन सत्ता र सरकार चलाउने कुरामा सफल छैनन् । तसर्थ अहिले यो कुरालाई झुटो प्रमाणीत गर्नका निम्ति पनि नेपालका सत्तासिन कम्युनिष्टहरुले कामलाई अनुकुल वनाउदै राम्रो काम गर्न जरुरी छ ।
संसदिय शासन प्रणाली यस्तै यस्तै झोझ झमेलायुत्त नै हो त्यसैले यस्ताखालका झमेलालाई पार लगाउदै, समय घर्किदै छ अब कामलाई गति दिनै पर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले देखिएको गम्भिर विवाध र अन्र्तसंगर्षको समा झन पार्टी भित्रको चरम झमेलाले अगाडि बढन सकिदैन । पार्टीलाई विधि विधानअनुरुप यस अघि आफैले वनाएको दस्तावेजमा कसैलाई चित्त वुझे पनि वा चित्त नवुझे पनि आउदो महाधिबेशन सम्मका लागि जनताको जनवाद नै हो । माओवादीको २१ सताव्दीको जनवाद र तत्कालिन एमालेको जनताको वहुदलिय जनवाद को ठाउमा वर्तमान दस्तावेज प्रतिवेदन प्रष्ट वोलेको छ र चालु कार्यक्रम जनताको जनवाद तय गरिएको छ । महाधिवेशन अगावै वैचारिक वहस शुरु नहुदा सम्मकालागि जनताको जनवाद मात्र हाम्रो कार्यक्रम हो । तर केही जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरु नै अन्टसन्ट वोल्ने कुरा पार्टी एकतालाई भाजो हाल्ने विषय वन्न गै रहेको छ । अतः पार्टीले निर्णय गरेर वहस नछेड्दा सम्म नेता कार्यकर्ता सबै सिमामा रहन र सेवाग्रही प्रति जनता प्रति अनुशाशित र सकारात्मक भावका साथ प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।
समकालिन नेपाली नेताहरुमा अलि नम्वर वान वौद्धिक शिर्ष नेताको श्रेणीमा क.केपि ओली , क. प्रचण्ड र क. माधव नेपाल पर्नु हुन्छ । यी नेताहरुका आआफ्नै योगदान त्याग र योग्यताहरु छन । तर पछिल्लो समय नजानेर पनि होइन विभाजनले ठीक गर्दैन भन्ने पनि थाहा छ तर पनि फर्मलिटी पुरा गरे जस्तो गर्ने अलिअलि कैलेकाही भेट पनि हुने तर समय घर्काउदै जान चाहेको देखिन्छ , विखण्डन गर्न चाहने विचारले हो या अरु कुनैै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दवाव आदि कारणले हो पार्टी बैठकमा जान नचाहने बैठक स्थगित गर्दै जाने गरिएको छ । यसरिनै जादा यही साउन १३ गतेको बैठक एकतर्फि रुपमा स्थगित एकातर्फ भयोभने अर्काै तर्फ बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक सम्पन्न भएको छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छकि पार्टीमा ठूलो समस्या परेको छ । गम्भिर अन्तरविरोध देखा परेको छ ।
राष्ट्रियताको सवालमा विगतमा ओली कमरेडको विशेष पहलकदमिमा गरिएको महाकाली सन्धी राष्ट्रियताको सवालमा अत्यन्त कमजोर थियो ,त्यसको कारण पार्टी विभाजनको तह सम्म गएको विगत तथ्य हाम्रो सामु छदैछ । तर अहिले कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा को सवालमा र विगत नाकावन्दिमा राष्ट्रियताको सवालमा कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल, सचिवालयमा गरिएको पार्टी निर्णय अनुरुप प्रधानमन्त्री दह्रो संग उभिनु भएकोलै पछिल्लो समयमा गरिएका निर्णयहरु ठीक दिशाउन्मुख भएका छन ।। कोरोना महामारीको लागि काम गर्न एकातर्फ छ भने राष्ट्रियताको सवालमा संघर्ष गर्दै अघि बढनुपर्ने छ । ठीक यही वेला पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने काम पनि यतिवेलै परेको छ ।
वास्तवमा अहिले नेकपामा भएका नेताहरु एकसेएक शशक्त र परिपक्क नै छन यस्तो अवस्थामा साझा र सामुहिक ढंगले पार्टी चलाउने विधि र प्रक्रिया सम्मत पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने काममा लाग्नै पर्दछ । यो पार्टी धेरै घटक एकतावद्ध हुदै अघि बढेको र यो अवस्थामा आइपुगेको विषय सबैलाई छर्लङ्ग नै थाहा छ । पछिल्लो पटकको पार्टी एकिकरण महत्वपूर्ण शक्तिको रुपमा रहेका मूल प्रवाह बाट वनेको छ । तसर्थ यो पार्टीलाई अहिले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको आधा समय कटिसकेको छ । अवका दिनहरु दिनगन्तिकासाथ अगाडि बढीरहेका छन् । तर जीवन्त पार्टीमा भै रहने यस्ताखाले अन्तरविरोेध र अस्तव्यस्तता छिटो छिटो अन्त गरी पार्टी पङति , जनसमुदायमा सकारात्मक शन्देस दिन पर्ने भएको छ । निश्चित रुपमा अब अग्रगामी छलाङ्गमा जान ढिला भैसकेको छ । कोरोना को माहामारि र भारतको दादागिरिका कारण राष्ट्रियताको सबाल प्रधान वनिरहेको छ , जसका कारण सिङ्गो देश एकतावद्ध हुदै अगाडि वढनुपर्नै वर्तमान परिस्थिति हो । यस्तोवेला पार्टी भित्र मिलेर जानु पर्दछ । तसर्थ नेताहरुले वुद्धि पु¥याएर विगतमा झेै पार्टीेलाई छिट्टै मिलाएर लैजानुु पर्दछ ।